Warar Goos goos ah. Ruunkinet 31/10/2009
Xiisado dagaal oo laga soo sheegayo magalada tayeegloow ee gobalka bakool iyo dagalao xalay ka dhacay deegaan kaasi
Xiisad xoogan ayaa mar kale saaka laga soo sheegayaa degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool, kadib markii xalay dagaal xoogan oo uu ku dhex maray gudaha Degmadaas Shabaab iyo Xisbul Islaam.
Sida ay sheegayaan wararka dadka deegaanka ayaa bilaabay in ay ka qaxaan deegaanka kuwaasoo u baxsanayay tuulooyinka ku dhow dhow, waxaana labada ciidan ee dagaalamay ay yihiin kuwo saaka is hor fadhiya.
Inkastoo xaalad degenaansho ka jirto deegaanka ayaa hadana cabsida dadka ay tahay mid taagan, iyadoo aan la kala qaadin Ciidamada wada hardamay.
Wariye ku sugan gobolka Bakool ayaa soo sheegaya in xiisada ay u muuqata in mar kale soo cusboonaato sababo dhaq dhaqaaqyo ciidan ay labada dhinac wadaan.
Is maandhaaf ka jiray Maamulkii deegaanka ayaa ahaa mid bilow u ahaa gacan ka hadalka xalay dhex maray, iyadoo Odayaasha deegaanka horay ugu xukmiyeen maamulka deegaanka in Shabaab looga dambeeyo.
Sidoo kale xiisadaha labada dhinac ee Islaamiyiinta ayaa soo dedejisay dil qorsheysan oo maalmo ka hor gudaha Tiyeeglow loogu geystay Sarkaal Xisbul Islaam ah, kaasoo sii xoojiyay xiisada awooda maamul.
Kooxaha Shabaab iyo Xisbul Islaam ayaa ka wada arimiya qeybo ka mid ah Gobolka Bay iyo Bakool, waxaana labada dhinac u dhaxeeya loolan dhinaca awooda iyo maamulka oo ku aadan deegaanada gobolada dalka
Burcad badeedda Soomaaliyeed ee haya laba ruux oo British ah ayaa weydiistay $7m oo madax furasho ah.
Geeddow Cali, oo saxafada lahadlayay ayaa sheegay in uu joogo Xarar Dheere, ayana dalabadeen lacagtaasi madax furashada ah maaddaama khasaare la soo gaarsiiyay, ayuu yiri, kalluumeysatada degaanka.
Wuxuu ku tilmaamay in aanay wax yeeli doonin dadkaas, haddaan iyaga wax la yeelin.
Waxaa kale oo uu sheegay in rachel Chandler uu la hadashiiyay walaasheed.
Ma cadda cidda lacag intaa le'eg ka dhiibi doonta qoyskan. maalmo kahor ayay ahayed markii lamana yashan u dhashay dalka ingariiska laga afduubtay xiibaha somalia iyaga oo ku safraya iyadoo dowlada ingariiska aya walaac ka muujisay afduubka muwadiniintooda ilaa iyo iminka majirto wax cid ka jawabtay dalabka burcad badeeda somalida ay soo jeediyeen
Wararkii ugu dambeeyay dagaal shalay ilaa saakay ka soconaya duleedka Magaalada Beledweyne
Sabti, October 31, 2009(HOL): Waxaa wali ka soconaya duleedka Magaalada Beledweyne dagaal u dhaxeeya Ciidamo ka kala tirsan Ururka Xisbul Islaam iyo Dowladda Soomaaliya kuwaasi oo gelinkii dambe ee shalay dagaalkoodu ka bilawday halka lagu magacaabo Qowlad oo ku taalla duleedka Garoonka Diyaaradaha Ugaas Khaliif isla markaana wax ka yar 15-km dhinaca W/qooyi kaga beegan Magaalada Beledweyne.
Wararkii ugu dambeeyay ee saakay soo baxayna waxaa ay sheegayaan in mar kale Ciidamada Dowladda iyo kuwa Xisbul Islaam dagaal ku dhaxmarayo buuraha ku teedsan Magaalada oo sida wararku sheegayaan isku fidiyeen Ciidamada Dowladda Soomaaliya oo u muuqda kuwo ku sii dhawaanaya Magaalada Beledweyne.
Dagaalka shalay oo ahaa mid aad u culus ayaa lagu waramayaa in ay ku geeryideen ku dhawaad 6 ruux oo ka kala tirsan dhinacyada dagaalku dhaxmarayo, lamana oga khasaaraha dagaalkan mar kale saakay ka bilaawday daafaha Magaalada.
Ciidamada Xisbul Islaam ayaa isaga guuray dhamaan xarumihii ay ka dagaanaayeen Magaalada Beledweyne sida Xarunta Maamulka Gobollka, Saldhigga Baliiska, iyo Gaalshiraha oo markii hore ay fariisimo ku lahaayeen, waxaana dadka ku dhaqan Magaalada su'aalo iska weydiinayaan halka ay u jiheysteen Ciidamada Ururka Xisbul Islaam oo maalmihii aynu soo dhaafnay gacanta ku haya Magaalada Beledweyne.
Runkinnet, Abdirashid, Rashka